China BICYCLES BIRYCLES China Rider SLOWLY. NGINGAKWENZA OKWENGEZA IBHADA? Ezokukhiqiza Nezimboni | IsiLenda
Ama-BICYCLES WOKUKHETHA Agibela KAKHULU. NGINGAKWENZA OKWENGEZA IBHADA?
Muva nje, umsebenzisi osebenzisa imoto kagesi uphakamise umbuzo onje: Ibhayisekili kagesi engisanda kulithenga lihamba kancane. Ngingakwazi ukufaka ibhethri ukulenza lisheshe? Kulombuzo, impendulo yeqembu lenkampani ye-motorow-Tech yenkampani ye-technical after-sale ayikwazi ukwengeza amabhethri ngezizathu ezine eziphambili.
Okokuqala, umkhawulo kasayizi webhokisi lebhethri, awukwazi ukwengeza amabhethri amasha
Wonke umuntu uyazi ukuthi amabhethri aklanywe ngokucophelela ngaphambi kokuba ahambe efektri, kufaka nosayizi webhokisi yebhethri. Lapho ibhethri lenziwa kuphela lapho kungeke kube khona ukuvuza ngenxa yokuqhaqhazela. Ukuthatha ibhayisekili kagesi eyi-48V njengesibonelo, yakhiwa ngamabhethri amancane ama-12V, kanti ibhokisi lebhethri linakho futhi ukwamukela amabhethri amancane ama-4. Akunakwenzeka ukwengeza amabhethri amasha.
Okwesibili, izinga elisha likazwelonke lezimoto zikagesi livinjelwe, futhi amabhayisekili kagesi anamabhethri amasha ongezelwe wona ngeke abe semgwaqweni.
Ezingeni lesizwe elisha, ibhethri lamabhayisekili kagesi alikwazi ukudlula i-48V. Uma abasebenzisi bafuna ukwengeza amabhethri amasha, ngokusobala abahlangabezani nenqubo entsha kazwelonke, futhi izimoto ezinjalo zikagesi zizohlukaniswa njengezimoto ezingeyona esezingeni. Noma umsebenzisi etholile ilayisense, imoto enjalo kagesi ayikakwazi ukujabulela ilungelo lendlela, okuwukuguqulwa okungekho emthethweni. Mhlawumbe abantu abaningi bafuna ukusho, ungaluhlukanisa lolu hlobo lwemoto njengesithuthuthu sikagesi? Impendulo ithi cha. Ngakho-ke, kusuka kuleli phuzu, amabhayisikili kagesi awakwazi ukukhokhiswa amabhethri.
Okwesithathu, izinga lokwehluleka kwamabhayisekili kagesi ngaphandle kwamabhethri liphezulu
Ngomqondo, amabhayisekili kagesi agibela kancane, futhi ukufaka ibhethri kungawenza asheshe. Kodwa-ke, ngokubuka okusebenzayo, ukwengeza ibhethri kungenzeka kushise imoto noma isilawuli, okwenza izinga lokuhluleka kwamabhayisekili kagesi liphezulu. Lokhu kusho ukuthi uma ingezelwa ibhethri, i-motor kanye ne-ophethe kufanele kushintshwe bese kufaniswa. Ukusuka kuleli phuzu, ukungathandeki kokungeza ibhethri kukhulu kunemihlomulo, futhi izindleko ziphezulu kakhulu, ngakho-ke awukwazi ukufaka ibhethri.
Okwesine, amabhethri kagesi angezwe ngaphandle kwemvume anezingozi ezinkulu zokuphepha
Kuboniswa ikakhulukazi ezicini ezimbili. Okokuqala, amabhayisekili kagesi anamabhethri angezwe ngasese anokuqina okuqinile nezingozi ezinkulu. Okwesibili, amabhayisekili kagesi anamabhethri angeziwe awekho esikalini sezibopho ezintathu zomenzi. Uma kunezinkinga ngezimoto zikagesi, zingaxazululwa ngezindleko zazo. Ngakho-ke, amabhayisekili kagesi agibela kancane, futhi ukufaka ibhethri ngeke kusebenze.
Ngamafuphi, Ukuthuthukisa imikhiqizo yobuchwepheshe obuphakeme bezemvelo bekulokhu kuyizindawo zokugxila kwenkampani yakwaMotow-Tech. Phonsa amakhono okuklama, ukukhiqiza nokumaketha ama-scooters kagesi, ama-e-bikini, ama-hoverboards nama-skateboards. Ukusuka kula maphuzu amane, amabhayisekili kagesi ngisho nangejubane i-Slow, awakwazi ukufaka amabhethri. Eqinisweni, abasebenzisi abadingi ukwandisa isivinini ngokungeza amabhethri. Ngokusekelwe esimweni samanje semakethe, izithuthuthu zikagesi nezithuthuthu zikagesi zingasetshenziswa endleleni.